Silicone yakapinda muhupenyu hwedu | Honneur
Silicone yakapinda muhupenyu hwedu
Silicone yakapinda muhupenyu hwedu nenzira dzakasiyana.
Izvo zvinoshandiswa zvemafashoni uye maindasitiri machira. Kunge elastomers uye ma rubber anoshandiswa kune adhesive, bonding vamiririri, machira emicheka, machira ekubatanidza uye vatengesi veSeum. Nepo mvura uye emulsions inoshandiswa mucheka kupedzisa, fiber lubricants uye process zvinobatsira.
Silicone yekubika inoshandiswa mune chipfeko inoita kuti ifeme uye igadzikane. Ndichiri mumabasa ekumaindasitiri senge mota, kuvaka uye zvemitambo nhumbi, silicone coating inopa simba, kuramba kubva kwakanyanyisa kupisa, kunyorova, UV miseve uye moto.
Silicone tekinoroji yakawana mukurumbira mune zvese mafashoni uye maindasitiri emachira ekushandisa. Mune fashoni, silicone yakavakirwa machira ane zvakawanda zvakanakira. Iyo inogona kuderedza shrinkage, kukwenya kwemahara, kukwenya kwakasununguka, kuwedzera hunyoro kumucheka, kune yakakwirira mvura repellency. Silicone kumonera pamachira inochengetedza kusimbisa kwemucheka uye haina kuve yakaoma mukutonhora kana kuora kana yaiswa tembiricha yakanyanya.
Silicones iri nyore kugadzira uye nokudaro inodhura. Silicones inogona kuoneka semahara inoyerera maini, akaomesesa mapurasitiki, gels, rabha, hupfu uye zvimedu zvakatetepa pane mvura kana gobvu kunge pasita. Kubva pane aya mafomu eSilicone, asingaverengeki silicone zvakavakirwa zvigadzirwa zvakagadzirwa uye zvinogadzirwa pasirese nekuda kwezvakasiyana zvemachira uye maindasitiri.
Nguva yekutumira: Jul-16-2020